शिशिर भण्डारी अचानक यस्तो रुपमा भेटिए । कपाल मुण्डन गरेर साङलोमा बेरिदै के गर्दैछन् ? (भिडियो हेर्नुस) – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Video/शिशिर भण्डारी अचानक यस्तो रुपमा भेटिए । कपाल मुण्डन गरेर साङलोमा बेरिदै के गर्दैछन् ? (भिडियो हेर्नुस)
रचना रिमालको आवाज रहेको चर्चित गीत फोटो फिरिममाको मेल भर्सन यहि असार २९ गते सोमबार युट्युबमा आउने भएको छ । उत्कृष्ठ भिडियोका साथमा आउन लागेको भिडियोको छायाँकन सकिएको छ । शिशिर भण्डारीको शव्द र सँगीत रहेको गीतमा प्रताप दासको आवाज रहेको छ । निकै प्रतिक्षा गरिएको गीतका लागि शिशिरले आफ्नो लुक्स नै परिवर्तन गरेका छन् ।
पोष्टर सार्वजनिक पछि गीतको अझै चर्चा भएको छ । शिशिरको लुक्सले गीतको बारेमा दर्शक, श्रोता माँझ झनै कौतुहलता थपेको छ । २ दिन लगाएर छायाँकन गरिएको गीतमा शिशिरसँगै रिस्ता बस्नेतको पनि अभिनय रहेको छ । सागर बाबु भट्टको निर्देशन रहेको गीतलाई अनिल के. मानन्धरले खिचेका हुन् । यसरी भयो गीतको सुटिँग हेर्नुस रचना रिमालको आवाज रहेको चर्चित गीत फोटो फिरिममाको मेल भर्सन यहि असार २९ गते सोमबार युट्युबमा आउने भएको छ । उत्कृष्ठ भिडियोका साथमा आउन लागेको भिडियोको छायाँकन सकिएको छ । शिशिर भण्डारीको शव्द र सँगीत रहेको गीतमा प्रताप दासको आवाज रहेको छ । निकै प्रतिक्षा गरिएको गीतका लागि शिशिरले आफ्नो लुक्स नै परिवर्तन गरेका छन् ।
पोष्टर सार्वजनिक पछि गीतको अझै चर्चा भएको छ । शिशिरको लुक्सले गीतको बारेमा दर्शक, श्रोता माँझ झनै कौतुहलता थपेको छ । २ दिन लगाएर छायाँकन गरिएको गीतमा शिशिरसँगै रिस्ता बस्नेतको पनि अभिनय रहेको छ । सागर बाबु भट्टको निर्देशन रहेको गीतलाई अनिल के. मानन्धरले खिचेका हुन् । यसरी भयो गीतको सुटिँग हेर्नुस